I-Samsung Pay sele inabasebenzisi abamalunga nezigidi ezili-14 kumazwe angama-25 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iqonga lokuhlawula Samsung Pay Ibikho ukusukela ngo-2015 kwaye ixhase ukuthengiselana okungabalekiyo. Isipaji sedijithali sikhulile, ngokuhamba kweminyaka, isiseko somsebenzisi kwaye, ngokweedatha ezisemthethweni, Okwangoku inabasebenzisi abazizigidi ezili-14 kwihlabathi liphela kwaye iyenziwa kumazwe angaphezu kwama-25.
Isamsung Pay iyahambelana neefowuni ezahlukeneyo zeSamsung kwaye, nangona isiseko sayo somsebenzisi sikhule ngokumangalisayo kwisithuba seminyaka emi-4 ukusukela oko saqala, Idatha ibonisa ukuba inkonzo yokuhlawula ngaphandle kokunxibelelana ithandwa kakhulu kwilizwe lasekhaya le-Samsung eMzantsi Korea, njengoko bekulindelekile.
Ilizwe laseAsia lenze phantse i-80% yeentlawulo zayo ezilula ngaphandle kweintanethi. NgokweNkonzo yoLawulo lwezeMali. Ingxilimbela yezobuchwephesha ixele oko Ukuhlawulwa kweSamsung kudlulile kwi-40 trillion yoMzantsi Korea iphumelele (KRW), inani elilingana ne-33.7 yezigidigidi zeedola, kwimicimbi eyenziweyo ngo-Epreli 2019, nge-25% yentengiselwano ngohlobo lweentlawulo ezenziwa kwi-Intanethi.
Intlawulo yokunxibelelana ne-Samsung Pay
Isamsung Pay ibandakanya ubuchwephesha bokunxibelelana kwecandelo (i-NFC okanye eyaziwayo yahlulahlulwe 'njengoNxibelelwano lweeNdawo ezikufuphi') kunye ne-MST (uKhuseleko lweMagnetic ekhuselekileyo). Oku kuye kwenza ukuba inkonzo ihambelane noluhlu olubanzi lwamanqaku okuthenga, njengoko abanini banokusebenzisa zombini iteknoloji ye-NFC yokunxibelelana (licwecwe) njengetekhnoloji yemigca yemagnethi esetyenziswa ngamakhadi amaninzi.
Iqonga lokuhlawula liyahambelana neemodeli zeflegi ye-S, kunye ne-middle-range ye-Galaxy A kunye ne-J. Inkonzo yentlawulo ikwafumaneka kwii-smartwatches zeSamsung zeGear kunye nenkqubo yokusebenza yeTizen, eyenzelwe bona kuphela.
I-BBVA ekugqibeleni ifika kwi-Samsung Pay eSpain
Okwangoku, Ungasebenzisa kwakhona i-Samsung Pay ukufaka / ukukhupha imali kwii-ATM, ukongeza kwinto yokuba ixhasa iintlawulo ngohambo kunye namakhadi ahlawulelwa, kunye nePayPal.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Pay sele inabasebenzisi abamalunga nezigidi ezili-14 kumazwe angama-25
Ukufowuna ukusuka eSpain ukuya eYurophu kungabizi kakhulu